विचार यमबहादुर दुरा
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने त्यही मिडियाले आफ्नो वैचारिक लाइनभन्दा बाहिरको विचारलाई ढिम्किन दिएन भने त्यहाँ पनि हिसाब गडबड हुन्छ। यो आफैंमा दोहोरो मापदण्ड हो। घुमीफिरी गणित उही हुन आउँछ- लोकतन्त्र र बहुलवादको नाममा एकल विचारधाराको पक्षपोषण।
मेरो उमेर जति बढ्दै गयो मलाई के कुरामा त्यति नै बढी मात्रामा विश्वास लाग्दै गयो भने महान् पुरुष तथा महिलाको संगतबाट जुन शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ, त्यस्तो शिक्षा कुनै किताब अथवा महँगा शैक्षिक सामग्रीबाट हासिल गर्न सकिँदैन!
चेतन कार्की : ‘माछा हाकिम’ देखि लोकसंस्कृतिका सारथिसम्म
चेतन कार्की गाउँघरमा प्रचलित शिष्ट शैलीको दोहोरीलाई लोकगीतको उच्च विधा मान्थे। गीतको शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै गाउँका अपठित जनले उही लय, टेम्पो, मिठास र शिष्टता कायम गरेर प्रत्युत्तर दिनसक्नु चानचुने कुरा होइन भन्ने उनको बुझाइ थियो।
शिक्षा पाउन संघर्ष शहरको बानीबेहोरा चाल पाएको थिइनँ। त्यसैले कहाँ जाने भनेर मैले पत्तो पाइनँ। मैले धेरै ठाउँमा बास मागेँ। तर, सबै ठाउँमा पैसा चाहिन्छ भने। मसँग एक पैसा थिएन। मसँग केही उपाय थिएन।
सुन्दर बग्दै छ बागमती घरबाट निस्कने फोहोरलाई जथाभाबी फाल्ने, आफू खुशी भए पुग्यो, दोस्रो व्यक्ति र समाजबारे नसोच्ने कारण वातावरणमा असर परेको छ।
कोभिड-१९ संक्रमण : डाक्टर नभएमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कोभिड संक्रमित पूरै निको हुन्छन्, त्यसैले आत्तिनु हुँदैन। तर, केही सतर्कताका उपाय भने अपनाउनैपर्छ।
बहुमूल्य पर्वतराज कञ्चनजंघा कञ्चनजंघा सजिलै भत्काउन सकिने, सियोको टुप्पो जस्तो सानो चुच्चो होइन। यो विशाल, भीमकाय र विस्तीर्ण मुद्राको, स्थूल र सुदृढ चुचुरो हो। यति हुँदाहुँदै पनि यो स्पष्ट र निर्दिष्ट बिन्दुमा अकाशिएको पनि छ।
'ठूला-ठूला परिवर्तन पनि कति सजिलै गरिन्छ' सबीर हका इरानी कवि हुन्। तेहरानमा भवन निर्माण स्थलमा काम गर्ने यी श्रमिक-कविका ६ कविता:
संकटमा नेपालका सिमसार
सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसअनुसार, संरक्षणका लागि ठोस कदम नचाल्दा नेपालका सिमसार क्षेत्रहरु संकटमा परेका छन् ।
कहिलेसम्म उपलब्ध होला सबै नेपालीलाई कोरोना खोप ?
भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोरोना खोप पहिलो प्राथमिकताका नागरिकलाई दिन थालिइसकिएको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई क्रमशः खोप दिइने जनाएको छ। तर, थप खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन।
के हो बाहुनवाद ? के हो भाग्यवाद ? डोरबहादुर विष्टले नेपाली समाज विज्ञानमा ठूलो गुण लगाएका छन् तर चर्चित पुस्तक ‘फेटलिज्म् एण्ड डेभलेपमेन्ट’ मा बाहुनवाद, भाग्यवाद, आफ्नो मान्छे र चाकरीको उनको निष्कर्ष सैद्धान्तिक तथा तर्कगत दुवै तहमा समस्याग्रस्त छ।
किन बचाउने हाम्रा हर्रो, बर्रो, यार्चागुम्बा ? आधुनिक उपचार पद्धतिले निको पार्न नसकेको कोभिड–१९ कालमा हामीलाई हाम्रै परम्परागत औषधोपचार पद्धतिले थोरै भए पनि ढाडस दिएको छ। तर, हाम्रा थुप्रै औषधिजन्य वनस्पतिलाई एक–एक गर्दै शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो बनाइसकेको हामीलाई पत्तै छैन।
मजदुरलाई पाँच वर्षसम्म बेतलवी बिदामा पठाउँदै पाँचतारे होटल बन्दाबन्दीसँगै पर्यटक नआउँदा १० महीनादेखि थलिएका तारे होटलहरूले कर्मचारीलाई पाँच वर्षसम्म बेतलवी बिदामा राख्ने सूचना जारी गर्न थालेका छन्। कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनका लागि होटल संघ र मजदुर युनियनबीच वार्ता शुरू भएको छ।